Sebtembar 2017 waa bisha Maalgelinta Adeegyada - Transit | seattle.gov
Bishii Sebtambar 2017, mariinada soo socda waxay helayaan maalgalin dheeraad ah oo ka yimid Seattle Transportation Benefit District.
Marinka Baska Lambar 44: Waa iskuxirka ugu muhiimsan bari iyo galbeedka xaafadaha Ballard iyo University District iyo mustaqbilka khadka RapidRide, marinka buska lamabar 44 waxuu heli doonaan safaro dhawr ah si loo hubiyo in basku ku yimaado jadwalka 10 daqiiqo kasta maalmaha shaqada 6:00 subaxnimo ilaa 7:00 fiidnimo. Safarada waxaa lagu dari doonaa Marinka baska lambar 44 inta u dhaxaysa 12-5AM si loo hubiyo isku socodka magaalada, maalinta oo dhan, maalin kasta.
Marinka Baska Lambar 48: Mustaqbalka Khadka kale ee RapidRide waxuu muhiim u yahay adeegga isku xira University District, Capitol Hill iyo Mount Baker, Marinka Baska lambar 48 ayaa sidoo kale yeelan doona bas jadwalkiisu yahay 10kii daqiiqo kasta maalmaha shaqada, laga bilaabo 6:00 aroorinmo ilaa 7:00 fiidnimo. Safaro ayaa lagu dari doonaa Khadka ama marinka buska lambar 48 inta u dhaxaysa 12- 5AM si loo hubiyo isku xirnaanta magaalada oo dhan, maalinta oo dhan, maalin kasta.
Marinka Baska Lambar 50: Marinka keli ah ee u socda bari iyo galbeedka South Seattle, waa adeegga kaliya ee isku xira Lake Washington ilaa Puget Sound, Marinka Baska lambar 50 waxauu muhiimad u leeyahay isku xirka dadka u kala safra Rainier Valley, Columbia City, iyo West Seattle iyo noqoshada. Wakhti kasta oo maalintii ah iyo maalmaha toddobaadka. Safarada dheeraadka ah waxay xaqiijin doonaan in baska loo qorsheeyay inuu yimaado 30 daqiiqo kasta ama in ka fiican, 7da maalmood ee usbuucii, laga bilaabo 6:00AM ilaa habeen barka.
Marinka Baska Lambar 60: SDOT iyo King County Metro way wada shaqeynayaan si kor loogu qaado adeegga Marinka buska 60 ilaa 15 daqiiqo maalmaha shaqada laga bilaabo 6am ilaa 7pm. Waxaa kale oo muhiim ah isku xirka bari iyo galbeedka, Marinka Baska lambar 60 wuxuu siinayaa adeeg tuulooyin badan ee magaalada oo dhan ah, oo ay ku jiraan South Park iyo Beacon Hill.
Marinka Baska Lambar 65: Marinka baska lambar 65, oo ku lug leh Marinka baska lambar 67, wuxuu caawinayaa in uu buuxiyo farqiga 10 daqiiqo ama ka sii fiican ee adeega magaalada. Siyaadinta safarada dheeraadka ah waxay keenaysaa Marinka buska lambar 65 ku taagan jadwalka loo qorsheeyey 10-ka daqiiqo maalmaha shaqada laga bilaabo 6am ilaa 7pm. Safaro baa lagu dari doonaa Marinka baska lambar 65 inta u dhaxaysa 12-5AM si loo xaqiijiyo in isku xira magaalada, laga dhigi karo magaaldoo dhan maalintoo dhan, maalin kasta.
Marinka Baska Lambar 67: Marinka Baska Lambar 67 waxuu heli doonaan heer isku mid ah adeega marinka baska lamabr 65, iyadoo la hubinayo in mustaqbalka khadka RapidRide uu yimaado10 daqiiqo ama ka fiican adeega maalmaha shaqada laga bilaabo 6am ilaa 7pm. Safaro waxaa lagu dari doonaa marinka baska lambar 67 inta u dhaxaysa 12pm ilaa 5pm si loo hubiyo in isku xirnaanta laga dhigo karo magaalada oo dhan, maalinta oo dhan, maalin kasta.
Marinka basaska lamabar 3, 5, 11, 44, 48, 65, 67 iyo 70: Markii ay codbixiyayaashu ansixiyeen STBD sanadka 2014, qaar ka mid ah maalgashigayii ugu horeeyay waxuu noqday in la badbaadiyo Metro’s Night Owl Routes: 82, 83, iyo 84. Marinadaas (Wadooyinkaas) ayaa la beddeli doonaa Iyada oo la adeegsanayo heerarka adeegga oo la barbar dhigi karo marinada basaska lambar 3, 5, 11, iyo 70, adeegaa oo ka shaqeynaya 12 - 5 am, oo guud ahaan daboolaya si isku mid ah jidadka habeenkii ee Night Owl routes. Intaa waxaa dheer, in safaro lagu dari doono wakhtiga dambe ee habeynka. Marinka basaska lambar 44, 48, 65, iyo 67 (kor ka fiiri).
Maalgashigaan waxay naga caawin doonaan inaan horumarin ku sameyno heerarka kala duwan iyo yoolka aanu ku eegeyno, kadibna aanu gaarno go'aannada ku saabsan meesha iyo goorta la kordhinayo adeegga gaadiidka ee Magaalada Seattle:
Qoysas badan ayaa heli doona Gaadiidka joogtada ah: Levy to move Seattle iyo Transit Master Plan labaduba waxey horay u marinayaan in la kordhiyo tirada qoysaska ee magaalada in ay u socdaan meesha (boosteejada) gaadidka laga raaco 10 daqiiqo ama kaba yar. Ka dib wareegii koowaad ee maalgashiga STBD ee sannadka 2016, boqolleyda qoysku waxay labanlaabmeen min 25% ilaa 51% (2% waa goolkeena 2020). Iyadoo maal-galinnada bisha Sebtember 2017, waxanu siin doonaa 64% qoysaska Seattle 10-daqiiqo amase gaadiid la wamaagsan 10 daqiiqo gudahood iyagoo u soconaya guryahooda -waxaa intaa raacsan in goolkeena sanadka 2020-ka, uu na gaarsiinayo 8% goolkeena 2025.
Adeegga Gaadiidka Wanaagsan ee Dadka Dakhligoodu Hooseeyo, Dadka laga Tirada badan yahay, Naafada, iyo Dadkaan baaburta laheyn: Afarta marin ee maalgashiga badan ( Marinka basaska lambar 50, 60, 65, iyo 67) dhammaan waxay u adeegaan dadyowga in badan qoysaska dakhligoodu hooseeyo, dadka midabada leh, dadka curyaamiinta ah, iyo / ama qoysaska aan baabuur heysan.
Waxaa la heli dononaa mustaqbalka adeegyada basaska RapidRide ee wadooyinka: Marinka baska 44, 48, iyo 67 ayaa dhammaantood yeelan doona adeegyo mustaqbalka xawaaraha dheereeya ee loo yaqaano RapidRide ee wadooyinka Move Seattle Levy. Maalgashiyadan, shan ka mid ah todobada soo socota ee Seattle RapidRide waxay noqon doonaan maalmaha shaqada, maalinta oo dhan oo oo ay u dhexeyso 10-daqiiqo ama ka wanaagsan: Madison ( Marinka baska lambar 11/12), Rainier / Jackson ( Marinka baska lambar 7), 23rd Ave ( Marinka baska lambar 48) , Suuqa / 45aad ( Marinka baska lambar 44), iyo qayb ka mid ah Roosevelt ( Marinka baska lambar 67).
Adeeg Gaadiid Wanaagsan ee Xaafadaha Seattle: Maalgashiyada joogtada ah ee Khadka 60 waxuu adeegiisu noqonayaa 15-daqiiqo kasta ee xaafadda South Park. Maalgashiyada Marinka baska lambar 50 waxay hagaajin doonaan adeegga Admiral waxuuna bixin xiriiro xooggan ee isku xirka’ koonfurta Seattle.
Kordhinta Adeegyada Xiriirka Shabakada Gaadiidka Frequent Transit Network (FTN), Waxaa lagu abuuray Transit Master Plan waxey aqoonsaneysaa mudnaanta wakhti fog ee SDOT. Maalgashiyada Sabtember 2017 waxay hubin doonaan in waddo/khad kasta oo ka mid ah FTN ay hesho ugu yaraan 30 daqiiqo oo adeeg ah, todobo maalmood usbuucii, 18 saacadood maalintiiba Iyadoo marinadu badankood ay bixiyaan heer aad u sarreeya oo adeeg ah.